प्रहरीले बरामद गरेको सुन राजस्वमा पुग्दा तामा भयो - ट्विटर - साप्ताहिक
केही साताअघि प्रहरीले धादिङको गजुरीबाट चार किलो सुनसहित तीन व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत बरामद सुनसहित तीन आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीले त्यसरी बरामद गरेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुग्यो । विभागले केही दिनअघि मात्र भनिदियो– ‘धादिङमा प्रहरीले बरामद गरेको सुन, सुन होइन, तामा र ढलौट मिसिएको धातु हो ।’ मंगलबार यो समाचार सार्वजनिक भएपछि ट्विटरमा यही विषयमा केन्द्रित टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए ।
चाइनिज बस इन्डियन बन्छ, सुन बन्छ तामा । सुत्ने बेला हररात डर लाग्छ, बिहान ब्युँझँदा कतै मेरो सिङ र पुच्छर त पलाइरहेको हुँदैन ?
सुनलाई तामा बनाउने जादुगरहरू हाम्रै देशमा रहेछन् र पो हाम्रो देश गरिब भएको रहेछ ।
प्रहरीले बरामद गरेको सुन राजस्वमा पुग्दा तामा भयो रे । राम भनेर भोट दियो, पदमा पुगेपछि रावण भएझैं के सुन पनि नेताजस्तै भएको हो ?
‘सुन भनेर दंग परेको, भरे त तामा रहेछ’– यो हाम्रो तत्कालीन अवस्थाको समयसापेक्ष विम्ब हो । यो मलगायत सबैमा लागू हुन सक्छ है— ऐना हेरौं ।
आज सुन पसलभित्र के छिरेको थिएँ । पसलेले सोध्नुभयो– तपाईं प्रहरी त होइन ? म– किन र साहुजी ? सुन पसले– पुलिसले एकै छिनमा सुनलाई पनि तामा बनाइदिन्छन् रे, त्यसैले सोधेको हजुर । म– ट्वाँ ।
दिनेश अधिकारी चरी गैंडाको खागसहित समातिएर अदालत पुर्‍याइँदा खागजस्तै प्लास्टिकको सामानसहित पक्राउ भनेर मुद्दा दायर भएको कुरा जानेको हुनाले समातिएको सुन राजस्व पुग्दा तामा भएकोमा कुनै आश्चर्य उब्जन सकेन ।
प्रहरीले बरामद गरेको चार किलो सुन राजस्वमा पुग्दा तामा । सुन बरामद गरेको भनेर प्रहरीले १९ पुसमा पत्रकार सम्मेलन समेत गर्‍यो, तर राजस्व अनुसन्धान भन्छ– प्रहरीले बुझाएको वस्तु सुन होइन, तामा र ढलौट हो । धादिङका एसपी डम्बर बिक भन्छन्– ‘सुन भनेरै बरामद गरिएको हो, तर राजस्वले सुन होइन भन्यो ।’
पछिल्लो समयमा सुनलाई तामा र ब्वाइफ्रेन्डलाई मामा बनाउनेहरूको बिगबिगी छ ।
प्रहरीले बरामद गरेको चार किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागमा पुग्दा तामा र ढलौट मिश्रित धातु बनेको छ । हामीकहाँ पिसी सरकार भन्दा पनि ठूला जादुगर रहेछन् । सुनलाई छुमन्तर गर्नासाथ तामा बनाइदिन सक्ने ।
घरबाट ल्याएको एक डिब्बा तामा थियो, सुन बनाउने कता रहेछ ? सुनलाई तामा, तामालाई सुन बनाउने भए त गजब हुन्थ्यो ।
मेरो देश जहाँ बरामद गरिएको सुन पछि तामामा परिणत हुन्छ । मेरो देश, हो मेरो देश चमत्कारै चमत्कारको देश हो ।
आदि–अनादि कालमा तामाकोसीको नाम सुनकोसी थियो, कालान्तरमा सुन बगेर तामा मात्र बाँकी भएकाले तामाकोसी रहन गएको रे भन्दै थिए पल्लाघरे ल्याक्ते बा भनेर सुशील न्यौपानेले आफ्नो फेसबुकाँ लेख्या देखें ।
त्यो ४ किलो पहिले सुन थियो, अहिले तामा भएछ । छिट्टै फलाम हुनेछ । धन्यवाद नेपाल पुलिस ।
मान्छेले फलाम, तामा, चाँदी, सुनका सिक्का बनाउन थालेदेखि नै साथिभाइको पैसा डुब्न थाल्या हो ।
२०४४ सालतिर एकपटक सक्कली मूर्तिसहित चोर पक्राउ परे, अन्त्यमा मूर्ति नक्कली ठहर भो, चोर पनि छुटे, नक्कली ठहर भएको मूर्ति मन्दिरमा राखेर पूजा गरियो, सायद गरिंदै होला । देवता, प्रहरी, अदालत र अभियुक्त सबैलाई राहत भयो । पक्राउ परेको सुन अन्तत: तामा ठहर भएको समाचार पढेपछि सम्झिएको कुरा ।
वाइड बडी सेलाउँदै गो, शेरबहादुरको नामसँगै कांग्रेस लल्याकलुलुक भो, प्रहरीले पक्राउ गरेको सुन कसरी तामा भो, जनता जान्न चाहन्छन् । ऋषि धमला कता गो, पैसाले न्याय खरिद–बिक्री हुने देशमा कानुनी राज्यको कुरा नगर भो । हत्या, बलात्कार, तस्करी र कमिसन, भ्रष्टाचार त नयाँ व्यवस्थाको विशेषता भो ।
म त्यही देशको भाग्यमानी नागरिक हुँ, जहाँ सुनलाई तामा बनाइन्छ अनि दुनियाँलाई चटक देखाएर जनतालाई उल्लू बनाइन्छ ।
हैन, सुन पनि तामा हुन लागेछ त आजकाल ?
जब सुन तामा हुनसक्छ भने केपी ओली राजनेता किन हुन सक्दैनन् ?
बाँसको तामा, केत्तुकेको तामा, सुनको तामा ।
अति नै राम्रो भयो, जहिल्यै एउटै कुरा गर्नेहरू । मसँग बिहे गर्दा नाकमा दिनु परो, कानमा दिनु परो, घाँटीमा दिनु परो । अब ढुक्क हुनुहोस्, सुन तामा बन्छ भने हामी पनि बूढीलाई तामाको बनाएर सुन हो भनेर दिने ।
भनेपछि ३३ किलो सुन बाँडेर खाइ सकेपछि तामा ल्याएर गोरेलाई चोख्याउने तयारी सरकारले गर्‍यो, हैन त ?
‘व्यापारीले भेटे चाँदीलाई सुन बनाएर बेच्छन् । सरकारी हाकिम सा’बले भेटे सुनलाई तामा पार्दिन्छन् हाम्रो नेपालमा ।’ ट्याक्सी गुरुजीको बुधबारे वाणी ।
सुन पनि तामा बन्छ हाम्रो देशमा, कामदेव पनि आए जोगीको भेषमा ।
प्रधानमन्त्रीको उत्पादन बढाउने नीतिलाई नेपाल प्रहरीले कार्यान्वयन गर्दै रहेछ, तामा बनाउने उद्योग खोलेर । रमाइलो कुरा तामा बनाउन कच्चा पदार्थ चैं सुन चाहिँदो रहेछ ।
सुनलाई तामा बनाउने मान्छे पत्ता लगाएर उसको हातमा देश जिम्मा लगाउनुपर्‍यो, अनि बल्ल देश उँभो लाग्ने छाँटकाँट देखियो ।
जमाना मोडर्न छ । उदाहरण : बिहे अघि नै आमा हुनु, पुलिसले पक्रिएको सुन तामा हुनु । बाँकि तपाईं आफैं विद्वान हुनुहुन्छ ।